Thursday February 06, 2020 - 15:33:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaha dowladda Cunsuriga Mareykanka ayaa soo dhaweeyay go'aan kasoo baxay aqalka Odayaasha oo meesha ka saaraya dhammaan dacwadihii halista ee loo haystay.
Golaha Sanetka ee dowladda Mareykanka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay labo dambi oo xubnaha Kongrayska ay ku soo eedeeyeen Madaxwenaha dalka Mareykanka Donald Trump, kuwaas oo kala ahaa inuu ku takrifalay awoodda madaxtinimo iyo is-hortaagid uu ku sameeyey baadhitaan uu waday aqalka congress-ka.
Ugu yaraan 52 xubnood oo katirsan golaha sare ee Senete-ka ayaa u codeeyay in uusan Trump wax dambi ah gelin halka 48 xildhibaana ay u codeeyeen in uu dambi galay oo ay tahay in xilka laga qaado.
Mitt Romney oo kamid ah xildhibaanada ayaa noqday xildhibaanka kaliya ee ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee u codeeyay inuu Donald Trump ku takri falay awoodda madaxtinimo ayna tahay in laga xayuubiyo Xilka isagoo la saftay wakiillada xisbiga dimoqraadiga.
Dacwada ka dhanka ah Donald Trump ayaa soo bilaabatay bishii November ee sanadkii horay, balse go’aankan ayaa ka dhignaa midkii ugu dambeeyey ee arintaas lagu soo afjaray, waxaana hadda dalka Maraykanka looga diyaargaroobayaa dooorashada madaxtinimada ee Bisha november ee Sanadkan.